Global Voices teny Malagasy » Yadiko Uruk – Zanaky ny Paraky, ny Kôka Ary Ny Mangahazo Malefaka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 22 Oktobra 2014 3:19 GMT 1	 · Mpanoratra Ever Kuiru Nandika (en) i Ever Kuiru, Raveloaritiana Mamisoa
Tanàna monisipaly iray antsoina hoe Milan izahay, miorina adiny roa miala eo amin'ny renirano La Chorrera  ao Kolombia araka ny hitanao ao amin'ny sarintany eo ambony. Tsy mahafantatra ny fampiasana teknolojia ny ankamaroanay, saingy tsy maintsy ataonay ny hahaizana mana izany handraketana ny hiranay sy hanapariaka ny resaka Yadiko fomba am-panaonay, ka mba hipaka any amin'ny olon-kafa izany. Satria manana fahefana manasitrana ny Yadiko. Manasitrana ny vato, ny zavamaniry, ny ankizy, ny antitra, ny ady lehibe ary izay zavatra sokajiana fa manimba ny tontolo izy.
Ny fianakaviam-piteny Uitoto dia ao anatin'ilay antsoina ankehitriny fa vahoakan'ny Afovoany na Zanaky ny paraky, kôkà ary mangahazo malefaka, mieli-patrana amin'ny morondranon'i Caqueta, Caraparaná, Putumayo, Igaraparaná ary ny reniranon'i Amazonas (Leticia e Iquitos). Ny anton'izany fiparitahana izany dia noho ireo asa ratsy heloka bevava nataon'ny Casa Arana  [tranon'i Arana] amin'ny alalan'ny fitrandrahana fingotra sy ireo karazan'asa hafa tsy ara-dalàna (tigrillada, fivarotana rongony sy hazo an-tsokosoko).
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/10/22/64976/
 asa ratsy heloka bevava : https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_C%C3%A9sar_Arana_del_%C3%81guila